Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda gobolka Sool iyo Somaliland oo bilowday xeelad cusub oo ay ku qabanayso Boocame
October 16, 2020 Xuseen 6
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno gobolka Sool ayaa sheegaya in xukuumadda Somaliland iyo horjoogayaasheeda gobolka Sool ay wadaan qorshayaal ay ku qabsanayaan guud ahaan degmada Boocame iyo deegaamada hoosyimaada.
Malayshiyaad ka soo jeeda gobolka Sool gaar ahaan beelaha degan Boocame, ciidamo dhowaan la sheegay inay ka soo goosteen Puntland iyo qaar kamid ah ciidankii Somaliland ee gobolka ayaa lagu soo waramayaa inay isku urursanayaan buuraleey u dhexeeya Gambadha iyo Boocame.
U jeedada Somaliland ayaa ah inay degmada Boocame kala wareegto Puntland isla markaana ay ku biiriso degmooyinkii gobolka ee ay horay gacanta ugaga dhigtay maamulka Puntland xilli ay Somaliland isu diyaarinayso doorashooyinka barlamaanka.
Horjoogayaal ka soo jeeda gobolka Sool ayaa loo balan qaaday xilal sare iyo derejooyin ciidan haddii ay gacanta Somaliland soo geliyaan magaalada Boocame, waxaana ay wadaan dedaalo ay ku kasbanayaan shacabka deegaamadaasi.
Puntland ayaan weli ka hadlin qaadina wax tallaabo ah tan iyo markii ay soo bexeen dhaqdhaqaaqyada cusub ee ay Somaliland ka bilowday degmada Boocame oo ah halka uu ka soo jeedo wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland.
Aaway Khaatumadii iyo Farmaajaday daba ordayeen? Dhilkiina haddaad iidoor usoo horkacaysaan waa hawl idinka idiin taalla. Puntland Sool iyo waxaan fowdo nacayb ka hayn kama soo gaadhaan. Waar iidoorow waxooga cowsa siiya kabaha ha idiin qaadaane
Xasan Maad difaacatid adigu soow ma aadan oran jirin Anigaa ka taliya ?
Garoowe iyo Hargeysa waa laba Maamul, Dowladda dhexe laba Maamul Goboleed uma kala hiiliso,sidaas ma ogid miyaa?
Adigaa marna oranaya anigaa maamulo oo Doorashooyinka anigaa u xulaya Xildhibaannada, marna ma waxaad oran Dowladdii dhexe meeday?
Puntland waxay qaylo iyo buuq ahayn kama hesho reer Sool hadana hoosta ku wata haloo daayo xaqiiqadii IIDOORKA baa ka fiican Dhulbahante waa kula jire kaa Jire.
PL Hawshaas waa horay ka baxday, waxaan kaloo kula talin lahaa in PL aysan wax dagaal iyo abaabul ah aysan ka gaysan deegaannadaas, waayo dani ugu ma jirto weliba in dad uga dhintaan dan uguma jirto. Waxaa kalo PL la gudboon inay dadkaas sida kuwa kasoo jeeda Hargaisa Iyo Burco u oggolaato in xildhibaannadooda lagu soo xulo Xamar….Arrinta dambe waa muhiim ayagu ha is eedsadaan…..
Dhulbahante laba arrimood ba aan idiin iftiimiyo.Dhulbahante isagaa meel loo raaco lahayn.
Ehelnimo Majeerteen waqti ha isaga luminan,maxay ugu doodaan Puntland Harti etc?
Dabxan dhulka ay ku gorgortamayaan ayaa u badanaya iyo population ka.
Tusaale Majeerteen inta uu dego ma buuxin karaa 2 gobol kaligood?Degmooyinka iyo gobolada waa yar yihiin degmo ama gobol 100%beel kaligeed at degto,sidoo kale dhulka Majeerteen intiisa badan dhul micno leh ma ahan degmooyin bay isaga magacaaban yihiin balse ugama tagaysid 400 qoys.Bal fiiri iskushuban,bandarbayla,jariiban,eyl intaba waxaa ka aad badan Burtinle 2012 ayaan soo wada maray zero iyagoo dhan.
Markaa Harti ayaa miisaan u yeelay Buuhoodle,Laascaanood,Laasqorey etc waxaa soo baxay miisaan kale.
Maxaa usoo haraya Majeerteen waa Qardho,half Gaalkacyo half Boosaaso iyo Garawe marka waa siyaasad qabow kkkk
Majeerteen markii Gaalkacyo lasoo weeraro waliba qol yahaan reer mudugga Cumar Maxamud reer Maxamuud waa dagaal galayaan intooda kale waliba reer Bari shaqo kuma lahan Dagaal.ee idinku GARAAD GARAAD inta ka baxaan dhinac isu raaca ama labada dhinac ka gurta waxaad ka guran kartaan.
Waan hubaa Majeerteen qolo kastaa idiin dhaanta.
Puntland dhibkeedu waxa weeye, dad iska daayeh xawayaan baan meel kuu fadhiyeyn, haddii aysan kaa helayn daryeel iyo dawladnimo, Wasaaradaha Puntland meelna kama shaqeeyaan, mushahar toos ma baxshaan, raashin iyo mashaariic ma geeyaan, miyaanay haysan mise qorshaha uguma jirto, mise salka dawladnimada ayaanay aqoon, ma dadka inay Hartinimo ku haysanayaan bay u haystaan, Anigu ma fahmin, xataa marmar waxaad is odhanaysa malaha naceyb bay dadkaa u qabaan oo dan iyo muraad toona kama laha, waxaanse hubaa in xubnaha gobolladaa Puntland ugu jiraa, yihiin kuwa ugu garasho iyo damiir xun siyaasiyiinta Soomalida ee maamulada kala duwan ku jira. Ma waxay odhan kari waayeen waar dawladda Puntland eey dadka soo siiyaa waxoodii, cashuurna weydiiya, ama ilmaadeeryaal iska fasaxa waa tol eh dhulkaadaa how foof tageen, illeen dad iyo duunyo dhaqasho baa lagu maalaaye, haddii gabadh laguu meheriyo oo aad iska dhaqaaqdo oo gogol, guri , manfac, iyo ragganimo kaa weydo kuu fadhiyi meyso. Markaa dadka jahawareer baa la gelinayaa. Idinkuna bal si gun ku tashada, talada fiicanna Allah haydin garansiiyo, barwaaqo Alleh iyo Badbaado baan idiin rajaynaya